Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. - News: Federaalnimada Soomaaliya: Maxaa looga gol leeyahay? Warbixino xiriir ah
April 24 2014 03:30:14
Federaalnimada Soomaaliya: Maxaa looga gol leeyahay? Warbixino xiriir ah
Laga soo bilaabo bilihii ugu horreeyey sannadihii 1900 iyo lixdannadii, dawladda soomaalidu waxay aad ugu dedaashey sidii ay qaybahaasi gobannimadooda uga qaadan lahaayeen dawladaha Itoobiya, Faransiiska iyo Keenya. Mabda�a aayo-ka-tashiga, diblomaasiyad iyo dhexdhexaadin caalami ahba markii wax garawshiinyo ah lagu soo hoyn waayey ayaa waxaa abuurmay jabhado hubaysan oo gobannimo-u-dirir ah. Waxay ahaayeen dhammaantood jabhado ay Jamhuuriyaddu si buuxda u taageeri jirtey; xagga hubka, xagga dhaqaalaha, xagga dacaayadda iyo xagga diblomaasiyadda dirkaba. Taageeradaas ayaa markii dambe dawladda soomaaliyeed waxay geyeysiisay in laba jeer si toos ah ay dagaal foodda isku daraan iyada iyo Itoobiya:1964kii iyo 1977-�78kii.
Dagaalkii qaboobaa ayaa weli dunida ka aloosan. Laba awoodood oo waaweyn ayaa ifka ka jira, kuna loollamaaya. Midi waa hantigoosad (capitalist bloc), waxaana hoggaanka u haya Maraykan. Waxaa ku talo ah amaba ka amar-qaata Yurubta Galbeed, Jabbaan iyo qarammo yaryar oo adduunka meelo ka mid ah ku kala yaal. Awoodda kale waa bahda hantiwadaagga ama dalalkii shuuciga loo yiqiin (communist bloc). Iyagana Midowgii Soofiyeeti amaba Ruushanka ayaa calanka u sida, waxaana ku jaal ah Yurubta bari, Shiinaha, Aasiyada Koofur-bari dalal ku yaal, Bariga Dhexe iyo Afrika qarammo ka tirsan. Tartanka labadaas awoodood waa joogto. Mid waliba wuxuu u xusul-duubayaa mabda�a uu isagu aamminsan yahay sidii uu adduunka uga hirgeli lahaa, ummadaha ku dhaqanina ay u wada qaadan lahaayeen! Dawlado yaryar oo dunida saddexaad ku abtirsada ayaa sannad walba labadaas dhinac ku kala biiri jirey. Danta qarankooda ha u arkeen ama tooda qof ahaaneed ha u arkeene, madaxda dalalkaas ayaa badanaa go�aanka caynkaas ah qaadan jirtey; iyada oo dadweynuhu aanu taladaas wax weyn ku lahaan jirin.
Sannadkii 1969kii ciidammadu markii taladii Soomaaliya ay xukuumaddii rayadka ahayd kala wareegeen waxay muddo gaaban ka dib dalkii ku sidkeen bahda hantiwadaagga. Xiriir aad u dhow ayaa wuxuu dhex-maray maamulkii Kacaanka iyo Midowgii Soofiyeeti; xiriirkaas oo ay soomaalidu si weyn uga faa�idday, gaar ahaan xagga warshadeynta dalka iyo dhismaha ciidankii qaranka ee Xoogga Dalka loo yiqiin. Taas ayaana inoo fasiraysa awoodda ay Soomaaliya ku muquunisay gaasaskii Itoobiya ee muddada dheer dhan walba laga soo dhisaayey, boqortooyo fil weynina ay lahayd!
Kol dambe sida soomaalida u caddaatay, Ruushanku wuxuu ciidammada soomaalida ugu tabcaayey inay noqdaan awood kayd ah oo ay bahda hantiwadaaggu isku hallayn karto, laguna fuliyo hadba danaha caalamiga ah ee ay bahdaasi yeelato. Hase ahaatee, mabda�aasi si wacan ugama dhaadhicin madaxdii soomaaliyeed ee iyagu dhismaha ciidanka uga jeeday inuu ahaado cudud qaran oo lagu fuliyo himiladii afartannadii qarnigii 20d lagu ballamay; himiladii ahayd midaynta iyo gobeynta Soomaali-weyn.
Sannadkii 1974kii ayaa Geeska Afrika waxaa ka dhacday dhacdo layaab leh oo cid walba lama-filaan ku noqotay. Boqor Xayle Selaase-kii-Id oo 40 sano muddo ku dhow Itoobiya ka talinaayey ayaa lagu kacay. Wuxuu ahaa, markii madaxda gobolkaas la eego, ninkii ugu dhowaa Maraykanka iyo, guud ahaan, Reer-galbeedka. Waxaa sannadkaas boqorka soo food-saaray �kacaan dadweyne� oo mar qura oodda soo jabsaday, lana maarayn waayey. Shaqaalihii, ardadii dugsiyada, kuwii jaamacadda, beerreydii; cid walba ayaa ka qayb-gashay. Goor dambe ayaa waxaa Kacaankaas dhexda kaga soo dhacay saraakiil ciidammada ka tirsan. Qaskii iyo qalalaasihii ayay ka faa�idaysteen, dabadeedna guushii dadweynaha ayay si fudud u af-duubeen, una sheegteen!
Laakiinse, isla markiiba, iyaga qudhoodii ayaa xukunkii isku qabsaday, si ba�anna isugu laayey. Ugu dambaystiina, waxaa goobtii u adkaaday Gaashaanle Sare Mengistu Xayle Maryam oo isna ku dhawaaqay habka hantiwadaagga inay Itoobiya qaadatay, isuna rogtey Jamhuuriyad bahda shuuciga ku talo iyo tolba ah!
Dhinaca kale, maamul mabda�a shuuciyadda rumaysani in kastoo uu Addis Ababa ka dhisan yahay, haddana Maraykanku weli Itoobiya kama samrin. Sababo istaraatiiji ah awgood (kuwo diineed oran mayno, si aan argaggixiso naloogu malayn!), ma uu rabin Soomaaliya inay gobolka u adkaato. Sidaas darteed, dirirtii Geeska Afrika ee xilligaas waxaynu ku tilmaami karaynaa inay ka mid ahayd arrimo aad u tiro yar oo labada awoodood ay isku aragti ka noqdeen muddo 30 sano ka badan intii ay dagaalka qabow isaga soo horjeedeen! Labaduba Itoobiya ayay dhinaca saareen, una hiiliyeen, Soomaaliyana waxay af buuxa ugu sheegeen, shuruud la�aan, inay ciidankeeda dalka Itoobiya ugala baxdo.
Aragtidaas iyada ah waxay soomaalidu u qaadatay gardarro aan geed loogu soo gabban iyo eex qaawan. Dardarteedii xagga dagaalkase waxba kama beddalin. Halkeedii ayay ol�olihii xoraynta Soomaali-galbeed ka sii wadday, ciidammadii qarankuna Jigjiga ayay galbeed iyo waqooyiba u dhaafeen! Saa waxaa aad u dhaawacmay iskaashigii bahda hantiwadaagga iyo Soomaaliya, gaar ahaan xiriirkii diblomaasiga ahaa markii ay Muqdisho u goysey dalka Kuubba iyo Yamanta Koofureed (Cadan) oo iyagu si caddaan ah ciidammadii Itoobiya ula soo saftay, dagaalkana goor hore iyo goor dambeba kula jirey. Waxaa xigtey bishii Nofembar 1977kii Soomaaliya inay goysey xiriirkii iskaashiga ciidammada ee iyada iyo Ruushanka ka dhexeeyey, ka dib markii uu dalkaasi si bareer ah uga qayb-qaatay hawlgalladii Soomaaliya ka dhanka ahaa ee ay Itoobiya waddey. Dabadeedna, maroodigii baa inta umlay go�aansaday in guutooyinka soomaalida xoog lagu muquuniyo, laguna celiyo, markoodii hore, xeryihii ay ka soo duuleen. Sidaas bayna noqotay!
Waxaa xigey niyadjab heer qaran ah iyo jamhuuriyaddii oo is-aragtay iyada oo ban cidla� ah taagan, buur weyn oo ay ku tiirsataana aanay u ogog lahay
Taakulada dhaqaale ee aadka loogu baahnaa ka sokow, ujeeddada weyn ee dawladda soomaalidu waxay ahayd ciidankeeda dagaalkii dhowaa ku naafoobey inay Maraykanka hub iyo tabobbarba uga hesho. Waxaase kol walba loo sheegi jirey, si ay taageeradaas u hesho, bal horta inay ka hadho sheegashada ama u-ol�olaynta madaxbannaanida gobollada Soomaali-galbeed iyo Nfd, taasna ay go�aan qoraal ah ka soo saarto! Waxaa lagu war-geliyey, shardigaas haddii ay fuliso, welibana ay baabbi�iso hannaankii dhaqaale ee habka hantiwaagga ku dhismay in lagu kaalmayn doono sidii ay ku dhisan lahayd ciidan kooban oo daafaca soohdimaha uun ku filan!
Qodobkii furfurka dhaqaalaha si taxaddar badan ayay dawladdu u yeeshay, waxayna wadahadallo aan la mahadin la bilawday Bankiga Adduunka iyo Hay�adda Caalamiga ah ee Lacagta. Arrinta gobollada soomaalida ee la gumeysto waxay iyadana kaga jawaabtey inay tahay dadka gobolladaas deggan arrin u taal, sidaas darteedna aanay iyadu awood qaanuuni ah u haysan inay ka hadho ama ay cid saddexaad kala xaajooto. Waxay ahayd dood maan-gal noqon karta, asii aan laga yeelin!
In kastoo beer-dulucsiga Maraykanka ay diblomaasiyadda soomaalidu aad isugu dhabar-jebisay, haddana waxba uguma qabsoomin. Waxaaba jirtey siyaasad cusub oo dagaalkii 1977kii ka dib maamulka Washington lagula taliyey, ahna inaan xodxodashada Muqdisho dheg loo dhigin, isla markaasna aan faraha laga qaadin, si aanay mar kale ugu guryo-noqon xerada shuuciyadda. Hay�adaha siyaasadaha istaraatiijiyadda lagala tashado sida Golaha Daraasadaha Istaraatiijiyadda Caalamiga (Center for International & Strategic Studies), Guddi-hoosaadka Afrika u qaybsan ee ka tirsan Aqalka Baarlamaanka Federaalka iyo, weliba, aqoonyahannada sheegta inay arrimaha Geeska Afrika ku xeel dheer yihiin ayaa si fudud ugu guuleystey maamulka Maraykanka inay ka dhaadhiciyaan marna soomaalida inaan loo oggolaan ciidan dambe oo xoog leh inay yeelato. Taladaasna waxay ku sababeeyeen inay halis ku tahay ammaanka iyo xasilloonida Itoobiya iyo Keenya oo ay dhul ku sheeganayso, iyada oo Maraykanka iyo Reer-galbeedka kaleba ay labadaas dal ku leeyihiin dano ka waaweyn kuwa ay Soomaaliya ku leeyihiin amaba ay, timaaddada, ku yeelan karaan. Waxay go�aansadeen in saaxiibnimo loo muujiyo oo bahda hantiwadaagga laga soo fogeeyo, isla markaasna sidii cadow loo manjo-xaabiyo!
Si malaha aan ciidanka Xoogga Dalku dib dambe ugu dhismin, waxaa la hor-joogsadey si walba oo ay lacag adagi khasnadda dawladda ku soo geli karto. Waxaa laga bilaabay wixii yaraa ee Hay�adda Kaalmada Maraykanku (USAID) ay bixin jirtey. Bankiga Dhexe oo ay ahayd in lagu shubo ayay ka weeciyeen oo intay saraakiisha safaaraddu maamuleen u qaybiyeen ganacsatada kuwii ay gacansaarka lahaayeen ama ay ogaayeen xukuumadda dhisan inay la col ahaayeen! Waxay is-hortaageen mashruucii biyo-xireenka Baardheere oo, koronto dalka oo idil gaadha ka sokow, ay soomaalidu saboolnimada kaga bixi kari lahayd. Qaybtii ku soo aaddey markuu diidey ayuu dawladihii iyo hay�adihii kale ee caalamiga ahaana uu Maraykanku ku guubaabiyey inay wacad-furaan oo wixii ay ku ballan-qaadeen ka noqdaan. Curyaaminta ganacsigii wax-dhoofinta dibedda ee dalkuba uu ku dhaqnaa ayay haddana u soo dhigteen markii ay Sacuudiga ku guubaabiyeen inay joojiyaan xoolaha nool ee ay soomaalida ka gataan; taas oo fushay xukuumadda Riyaad markii ay ku andacootey noolka soomaalidu inuu buko. Tallaabooyinkaas manjo-xaabinta ahi waxay keeneen dhaqaalihii inuu si degdeg ah dhulka u galo, shilinkii soomaaliyeedna uu noqdo wax aan waxba ku toorrayn!
Intaas oo luggooyo ah kuma ay ekaane, bartamihii iyo dabayaaqadii 1900 iyo siddeetannadii Maraykanka iyo wixii ku talo ahaaba waxaa ka